Ebe azụta atọ nke igwe ịsa mmiri igwe - Akụkọ - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
Ebe azụta atọ nke eriri ịsa igwe igwe
Ọlammiri ịsa ahụugbu a bụ ụdị mmiri ịsa ahụ kacha ewu ewu. Enwere ọtụtụ narị ndị na-emepụta ụlọ na-emepụta ngwaahịa a, ma enwere ọtụtụ ụdị. Na mgbakwunye na ụdị mba ọzọ, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-enwe isi ọwụwa mgbe ịzụrụ. Amaghị m ka m ga-esi họrọ. Taa, onye nchịkọta akụkọ chịkọtara isi ihe atọ maka ịzụrụ, na-atụ anya ime ka ọ dịrị onye ọ bụla mfe ịzụta ngwaahịa a.
1. The metaleriri mmiri ịsa ahụbụ tie na-ejikọta faucet na ịsa ahụ. Ọ na-ejikarị igwe anaghị agba nchara 304 dị ka ọkpọkọ mpụta, EPDM dị ka ọkpọkọ dị n'ime, ma na-eji isi nylon na-eguzogide okpomọkụ. A na-eji ọla kọpa nke nkedo mee mkpụrụ ndị dị na nsọtụ abụọ ahụ, a na-ejikarị gaskets eme ya bụ rọba ding Nitrile. Mgbe ị na-azụrụ, ịkwesịrị ịhụ ma ihe eji eme ihe maka igwe ịsa ahụ dị mma.
2. Nke abuo, ịkwesịrị ịlele ma ọrụ nke ígwè ahụeriri mmiri ịsa ahụọ dị mma. N'ozuzu, igwe ịsa ahụ igwe dị elu nwere elu na-egbuke egbuke na-enweghị nchara ma ọ bụ nchara. O nwere ụfọdụ mmetụta nke ibu n'aka. Ọ bụrụ na ị bulie ya, ọ dị ike nke ukwuu. , Enwere ike kpuchie ya na Lin Yichen metal n'èzí nke plastik, ọ bụghịkwa ezigbo igwe ịsa ahụ. Lezienụ anya na ihe dị iche iche mgbe ịzụrụ.
3. Mgbe ahụ, gbatịa ọkpọkọ ịsa ahụ nke igwe ka ị hụ ka ọkpọkọ ịsa ahụ na-agbatị. Ọ bụrụ na enwere ike iweghachi ya n'ụdị mbụ ya ozugbo ọ gbatịchara, ọ pụtara na ịdị mma nke ọkpọkọ ịsa ahụ dị mma. A sị ka e kwuwe, mgbe ị na-eji igwe ịsa ahụ ígwè, ọ dị mkpa ka a na-agbatị ya mgbe niile, nke na-achọ ka a na-emegharị ọkpọkọ ịsa ahụ ozugbo ọ gbatịchara ọtụtụ ugboro.
Ọkpụkpụ ịsa ahụ ọla bụ ụdị ngwaahịa ịdị ọcha dị mfe iri. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na a na-edochi otu ọkpọkọ ịsa ahụ ọhụrụ ma ọ bụ abụọ kwa afọ n'ụlọ. N'ezie, mara isi ihe ịzụrụ ihe. Ịzụta ezigbo mma igwe ịsa ahụ nwere ike ibelata ọnụ ọgụgụ nke ịzụrụ. Ọ dịghịkwa echegbu onwe ya karị.
Nke gara aga:Kedu ka esi zere corrosion nke igwe anaghị agba nchara igwe ịsa ahụ?
Osote:Kedu ihe ndị a na-ahụkarị maka ịsa ahụ